झुट बोल्नुहुन्छ ? तपाईंलाई हुनसक्छ यी बेफाइदाहरु
scheduleआइतवार कार्तिक ९ गते, २०७७
एजेन्सी । मानिसहरु आफू अनुकुल झुट बोल्छन् । कुनै न कुनै बेला झुट नबोल्ने मान्छे सायदै नहोला । तपाई झुट बोल्दा बोल्दै बिस्तारै झुट बोल्ने बानी पर्छ । जसले गर्दा तपाईलाई बेइमानी बनाउन समय लाग्दैन । तपाई त्यसबाट जति नै टाढा भागेपनि पछि झुट बोल्ने बानीले तपाईलाई उम्कन दिने छैन । एक अनुसन्धानले यस्तै खुलाएको छ ।
उक्त अनुसन्धानको नतिजा अनुसार साना तिना झुट बोल्दा पनि हाम्रो दिमागलाई नकारात्मक भावनाले जोड्दिनेछ र भविष्यमा ठूला झुट बोल्नलाई प्रेरित गराउँछ । यसका साथै दिमागको एक भागमा भावना जोडिएको हुन्छ जुन झुट बोलेको समयमा सक्रिय हुनेगर्छ ।
जबकि दिमागको यो भागले बारम्बार बोलिएको झुटले कमरुपमा प्रतिक्रिया दिन थाल्छ जसले झुट बोल्नका लागि झन् होशला मिल्छ ।
यूनिभर्सिटी कलेज लण्डन (यूसीएल) को ताली शिरोतले भनेका छन्, ‘जब हामी निजी फाइदाका लागि बोल्नुहुन्छ नि त्यो बेला एक हिस्सा नकारात्मक भावना उत्पन्न गर्छ, यसले नै तय गराउँछ हामी कुन हदसम्म झुट बोल्नुपर्छ ।’
यी हुन् मुखभित्र देखिने क्यान्सरका पाँच स‌ंकेतहरु
यस्ता हुन्छन् मृत्युसँग जोडिएका सपनाका शुभ र अशुभ फलहरु
विवाहका लागि योग्य युवकले गर्नुहुँदैन यस्ता गल्तीहरु
यस्ता बानीले पुरुषलाई नपुशंक बनाउने काम गर्छ
यस्ता छन् तेजपत्ताका फाइदा
घामको एलर्जीबाट कसरी बच्ने ?
धन नभएर मन आत्तिएको छ, पढ्नुहोस्- तपाईको आँखा खुल्नेछ
सुरक्षित एटीएम ट्रान्जेक्सन चाहनुहुन्छ भने भूलेर नगर्नुस् यी काम
मनमा शान्ति प्राप्त गर्न अपनाउनुस् यी उपायहरु
असल जीवनसाथी खोज्न चिना हैन औंलाको संकेत नै काफी
कपालमा तेल लगाउँदा फाइदै फाइदा
पढ्ने कसरी ? यस्ता छन् सजिला तरिका
साँचो प्रेम गर्न थाहा पाउनुहोस् ओशोका यी १० विचारहरु
यी हुन् महिलालाई आकर्षित गर्ने पुरुषका पाँच अंगहरु
के तपाईलाई थाहा छ, दाह्री पाल्नुको यी फाइदा ?
नेकपामा युद्धविराम, दशैंपछि वारपार !
काठमाडौं, ९ कात्तिक । सत्ताधारी दल नेकपामा एक सातादेखि अस्थायी युद्धविराम चलिरहेको छ । यो समयमा शीर्ष नेताहरुबीच बोलचाल...
ट्रम्प यसकारण हार्नुपर्छ
अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन विश्वकै रचि र चासोको बिषय भएको छ । यसबारे म आफ्नो निजी विचार व्यक्त गर्न गइरहेको छु । यो...
दिल्लीलाई ५९ रनले हराउँदै कोलकाताले प्लेअफको दाबी बलियो बनायो
काठमाडौं, ८ कात्तिक । आईपीएलको १३औं सिजनको ४२औं खेलमा कोलकाता नाइट राइडर्सले दिल्ली क्यापिटल्सलाई ५९ रनले हराएको छ । टस हारेर...
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई रवीन्द्र मिश्रको ८ प्रश्न
काठमाडौँ, ९ कात्तिक । साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई भारतीय गुप्तचर निकाय ‘रअ’...
एकातिर नेकपा छ । विशालकाय संगठन र करिब दुइतिहाईको प्रचण्ड बहुमतसहित सत्तारुढ । व्यवहारमा के–के गर्दैछ, सत्ता र शक्तिको...
रहेनन् पुराना कम्युनिष्ट नेता मैनाली
झापा, ९ कात्तिक । झापाका पुराना कम्युनिस्ट नेता डिल्लीकुमार मैनालीको ७३ वर्षको उमेरमा आइतबार निधन भएको छ । विर्तामोड–८ देउनियाँस्थित...
बलर चम्किँदा पञ्‍जाबको शानदार पुनरागमन, हैदराबाद पराजित
काठमाडौं, ९ कात्तिक । यूएईमा जारी इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेट अन्तर्गत शनिबारको दोस्रो खेलमा किङ्स इलाभेन पञ्जाबले...
एजेन्सी, ८ कात्तिक । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले पाकिस्तानको राजनीतिक दल पाकिस्तान मुस्लिम लिग– नवाजका नेता नवाज...